Akhriso Magacyada Qaar ka mid ah xildhibaanada Aqalka Hoose – STAR FM SOMALIA
Akhriso Magacyada Qaar ka mid ah xildhibaanada Aqalka Hoose
Maamulka Puntland ayaa noqday maamulkii ugu horeeyay ee qabta doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Ammaanka magaalada Garoowe ayaa aad loo adkeeyay, Ciidamada Puntland ayaa sugaya ammaanka, waxaana la sheegayaa in labo meel ay doorashada ka dhaceyso.
Xildhibaannada Puntland Ee Aqalka Hoose waxaa ay u guuleysteen sidan:
Kursi 1aad: Cali Yuusuf Cali Xoosh ayaa noqday xildhibaanka ugu horreeya ee aqalka hoose, waxaana uu helay 49 cod, isaga oo ka guuleystay C/rashiid Xasan Yuusuf oo helay 1-cod, wanaa maqnaa nin xanuunsan.
Kursiga 2aad: Saciid Daahir oo helay 44 waxaa uu ka guuleystay Faadumo Ismaaciil Bootaan oo heshay 7 cod
Kursi 3aad: Cumar ismacil waaberi 28 ayaa ku guuleystay kadib markii uu ka adkaaday Maxmed cabdi cusmaan 22 cod, Dr. Cusman Cabdi Maxmud 1 cod
Kursi 4aad: Cilmi Cumar Diini oo 27 ayaa ku guuleystay, Abdiraxman Axmed Maxamud 24 ayaa kursigan ka helay, Zakriye
Kursiga 5aad: Axmed Ismaciil Xaaji ayaa 38 cod ku guuleystay, Imaan Maxamed Canshuur 12 cod
Kursiga 6aad: Maxamud Xayir ibraahim ayaa ku guulaystay kursigii 6-aad, Si Cod aqlabiyad le ah, Xayir waxaa la Tartamayay Abwaan oo Wasiir Hore ka soo Ahaa Puntland, Wuxuuna Heley 12-Cod Iyo Abdixaafid Cali Yusuf Ahaa Gudoomiyihii hore ee Gobolka Bari Wuxuuna Heley 2-Cod Kaliya.
Kursiga 7aad: Cabdinasir Saciid Muuse oo 26 cod helay ayaa ku guuleystay isagoo ka adkaaday Maxamed Saciid Saalix oo helay 17 cod, Cabddiraxmaan Maxamed oo helay 3 cod iyo Cabdulahi Maxamed Ciise oo helay hal cod.
Safiirka Turkiga oo sheegay in dowladda Soomaaliya ay bil walba siiyaan Labo Milyan oo dollar
War Deg-deg ah;Weerar Ismiidaamin ah oo goor dhow ka dhacay agagaarka Isgoyska Sayidka ee Muqdisho